Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal जसपाको साथ पाउनकै लागि विवादमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी ? - Pnpkhabar.com
जसपाको साथ पाउनकै लागि विवादमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी ?
काठमाडौं, ९ जेठ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधान विवादमै रहे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको जनाएको छ ।